Gbasara Anyị - TSINFA
Ị nọ ebe a: Ulo1 / Gbasara Anyị
Shandong TSINFA CNC Equipment Co., Ltd. e hiwere na 2000, mbụ n'ozuzu-egwe ọka igwe ngwaahịa maka ụlọ ọrụ na-amalite ngwaahịa, na mmepe nke na-aga n'ihu ọhụrụ, site onwe ha nnyocha na mmepe mmepụta, ika ọrụ na ụzọ ndị ọzọ iji gbasaa ngwaahịa akara . Ngwaahịa ekpuchi metal ọnwụ na metal akpụ abụọ dị iche iche, nkenke CNC cylindrical grinder, ihu cylindrical grinder, CNC lathe, cnc atọ-axis machining center, anọ-axis CNC igwe igwe, radial mkpọpu ala igwe, CNC bed, shaper, nkịtị lathe, eluigwe na ala-egwe ọka. igwe, mkpọpu ala igwe, igwe akụrụngwa. Ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe na anụ ụlọ na mba ahịa.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya n'ichepụta ngwaahịa na ọrịre nke akụrụngwa CNC igwe, akụrụngwa na ngwa akụrụngwa na mmepe. Mepụtara usoro TFA nke igwu ala ụgbọ ala na ịkụnye ihe mejupụtara, usoro BK nke anọ CNC axis, iji zute ihe ndị ahịa chọrọ maka nhazi nke ọma. Anyị uru na nzube bụ ike na-eri-irè imewe maka ọrụ na ndị ahịa, ka mma ngwaahịa na enterprise uru na imewe na ọrụ ọhụrụ.
Ndị ụlọ ọrụ na-agbasosi ike n'ezi ihe nke ịdị mma, iji hụ na akụrụngwa ọ bụla ruru eru na ụlọ ọrụ ahụ, iji hụ na ha nwere ike ime ike ha niile maka ndị ọrụ na ndị ahịa.
Anyị nwere ike ịnye ngwaọrụ igwe gụnyere:
Igwe ọnwụ igwe
Metal akpụ igwe
Hydraulic pịa igwe
Band igwe igwe
Machinlọ Ọrụ CNC,
CNC Vetikal lathe,
Gantry igwe Machine,
Antlọ Ọrụ Gantry,
Manual igwe Machine,
Igwe igwe igwe na ihe ndị ọzọ.
N'inwe ahụmahụ ọtụtụ afọ na mkpokọta na uto, anyị abụrụla ndị isi tozuru oke nke akụrụngwa akụrụngwa na ngwọta maka ndị ahịa anyị, ogo dịwanye mma na-aga n'ihu, echiche imewe na teknụzụ nhazi rụpụtara nke ọma.
Nke gara agaOsote
Ihe anyị na-emepụta:
Na mmụba nke mmepụta ọnụ ọgụgụ, anyị mepụtara ma ọ bụ zụta ọtụtụ elu-nkenke akụrụngwa gụnyere nnukwu-ọnụ ọgụgụ ụdị n'ala-egwe ọka / na-agwụ ike igwe, elu nkenke ndu grinder, itoolu isi igwe igwe na na, mgbe osobo anyị mkpa anyị, mmepụta arụmọrụ gbasaa.
Ji nke ukwuu-ọnụ ọgụgụ ụdị n'ala-egwe ọka / na-agwụ ike igwe, ọ bụ ime ka anyị ike na-emepụta nnukwu CNC vetikal lathe na nnukwu longmen-egwe ọka.
Nnukwu ọnụ ọgụgụ dị elu nke nkenke na-eji ụgbọ okporo ígwè na-egweri igwe eji eme ihe maka igweri ihe ndina na-eduzi okporo ụzọ, debe nkenke zuru oke.
Ejiri igwe igwe igwe iteghete mee ya, ọ na - eme ka arụmọrụ dị mma nke akwa lathe dị larịị nke ukwuu, ozugbo ị na - azụ ya, ma banye n'ime igwe eji eji ụgbọ oloko eji eme ihe maka imecha ngwa ngwa.
Igwe pụrụ iche maka nhazi nke igbe isi isi, mee igbe igbe ka ọ dị otu oge, nrụpụta ọrụ na-abawanye nke ukwuu.
Ngwá ọrụ nyocha:
anyị etinye ego ego iji zụta ngwá ọrụ nyocha nke ụwa, dịka ogwe aka, nguzo ike, Renishaw laser interferometer, wdg, jide n'aka na a na-enyocha ngwa ọrụ igwe ọ bụla.